Ya mere, ị na-na na akpatre mere ya. Put tinyela maka ezumike gị nọ ọrụ, zụtara gị ụgbọelu tiketi na-aga ka Hungary maka a ọma kwesịrị ezumike. Ma mgbe nke ahụ bụ ihe niile nke ọma na ezi – ka emechara, Budapest bụ a mara mma obodo – adịghị ere onwe gị obere site na ịrapara n'ahụ gburugburu isi obodo. Europe bụ a mma-ejikọrọ Afrika na ọtụtụ puku ndị nhọrọ maka ụgbọ okporo ígwè njem, na a na-agụnye Hungary. Ya mere, ozugbo ị na hụrụ Szechenyi Kwes bat ma nwee a pint na Beer Spa, isi nke obodo na otu n'ime ndị a 3 kacha mma Budapest ụbọchị njem ụgbọ okporo ígwè.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “3 Best Budapest Day Njem Site Train” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-budapest-day-trips-train%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)